लघुकथा : बहिष्करण | दर्पण दैनिक
लघुकथा : बहिष्करण
प्रकाशित मिति: २०७७ कार्तिक २४ गते ०२:१५
डा.पुष्करराज भट्ट ,
विगत १४, १५ दिन तनावमै बिते । नबितुन् पनि कसरी ? महामारीको फेला परिएकोले मन त्यसै अस्थिर भइरह्यो । “यो रोग लागेका धेरै मानिस निको भइसके । हामी पनि कसो निको नहोऔँला ।” चित्त बुझाउने एक बाटो यो पनि थियो । धेरै सावधानीसाथ यी दिन कटे । यसपछिका दिन कस्ता हुने हुन् खै ? मानिसले कुन रुपमा लिने हुन् ? यही सोच आइरह्यो । “हुन त तिम्रो रिपोर्ट अनुसार रोग निको भइसक्यो । तैपनि केही दिन अरु घरपरिवारभन्दा अलग्गै बस ।” अस्पतालबाट घर पुगेको केही बेरमै दाजुले भन्नुभयो ।
घरमा बस्दाबस्दा थाकेकोले एकछिन चौकसम्म पुगेर आउँ भनेको बाटोमा आशिष भेटियो । “तिमीलाई रोगले भेटेको सुनेको थिएँ । अब के कस्तो छ ?” उसले सोध्यो । “अहिले ठिकै छ । सामान्य अवस्था छ ।” मैले भनेँ । “केही दिन तिमीसँग हामीले नजिक हुनुहुँदैन होला । भौतिक दुरी त राख्नैपर्छ ।” आशिषले केही टाढा हुँदै भन्यो ।
मैले केही बोल्नु उचित ठानेन । सोचेँ, “यो रोग मलाई मात्र लाग्ने र अरु सब मानिस जस्ताका तस्तै स्वस्थ रहने त होइन होला ?”
म एकछिन चोकमा अलमलिएर घर फर्कँदै थिएँ, छिमेकी काकीले भन्नुभयो, “ओहो ! तिमी त मज्जाले घुमिरहेका छौ । कोरोना लागेको भन्ने सुनेको थिएँ । यसरी नडुल बाबु । हामीले पनि बाँच्नु छ ।”
“मलाई निको भइसकेको छ । म स्वस्थ छु । कोरोना जुनसुकै तरिकाले पनि सर्न सक्छ । मैले कोरोना बोकेर हिँडेको पनि छैन ।” मैले यति जोरले भनेँ की वरपरका मानिस सब मलाई हेर्न थाले । रोग लागेको मानिस एक समयपछि निको हुन्छ । स्वस्थ मानिसलाई बहिष्करणमा पार्न खोज्नेसँग लडनका लागि अब म सँग मेरो आवाज मात्र बाँकी छ ।